2019 ခုနှစ်အတွက် ယုံကြည်စိတ်ချရမှု အရှိဆုံးကား Brand အဖြစ် Lexus ထိပ်ဆုံးမှရပ်တည်နေ - Myanmar Automobile and Equipment Directory
J.D. Power သည် Customer စိတ်ကျေနပ်မှုကို အဓိကထားစာတမ်း ကောက်ယူပေးပြီး ထုတ်လုပ်မှုအရည်အသွေး၊ ကားထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု၏ Marketing ၊ advertising များအ ပေါ်အခြေတည်ကာ မှီခိုမှုကင်းစွာစာရင်များကို တိတိကျကျထုတ်ပြန်ပေးနေသည့် နာမည်ကျော် Survey Service ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ J.D. Power၏အရှိန်အဝါမှာ အမေရိက၊ ဥရောပဒေသ များ သာမကဘဲ အာရှအထိပါပြန့်နှံ့ပြီး ၎င်းတို့၏ Results များကိုလူအများက ယုံကြည်လက်ခံထားကြပါတယ်။
J.D. Power ၏တိုင်းတာမှုမှာ ပြဿနာတိုင်းကို ယာဉ်အစီး 100 (PP100) ဟုသတ်မှတ်ထားပြီး သက်တမ်း ၃ နှစ်ရှိမော်တော်ကားပိုင်ဆိုင်သူတိုင်း၏ ပြီးခဲ့သည့် ၁၂ လအတွင်းအတွေ့အကြုံများကို အခြေခံတွက်ချက် ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုရလျှင် ယခုစာရင်းမှာ ၂၀၁၆ မော်ဒယ်ထုတ်ကားများကို တိုင်းတာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် Customer မှပြဿနာအနည်းဆုံး Brand သာလျှင်အမှတ် အနည်းဆုံးရရှိပြီး ထိပ်ဆုံးနေရာ တွင်ရပ်တည်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ထိပ်ဆုံးမှ Lexus မှ 106 PP100 ၊ နံပါတ် ၂ နှင့် ၃ နေရာများတွင် Porsche နှင့် Toyota တို့က 108 PP100 ၊ နံပါတ် ၄ နေရာတွင် Chevrolet က 115 PP100 ၊ နံပါတ် ၅ နေရာတွင် Buick ၊ နံပါတ် ၆နေရာတွင် MINI ၊ နံပါတ် ၇ နေရာတွင် BMW ၊ နံပါတ် ၈ နေရာတွင် Audi စ သည်ဖြင့် အသီးသီးရပ်တည်နေပါတယ်။ 2019 အတွက် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအရှိဆုံး ထိပ်တန်း Brand များစာရင်း တွင်လက်ရှိပြည်တွင်းရောက် Brand New များထဲမှ Toyota ၊ Chevrolet ၊ BMW ၊ Hyundai ၊ KIA ၊ Volkswagen ၊ Mercedes-Benz ၊ Nissan ၊ Ford ၊ Mitsubishi ၊ Mazda ၊ Jaguar ၊ Volvo ၊ Land Rover တို့အစဉ်အတိုင်း ပါဝင်နေကြပါတယ်။
Readmore;တပ်မတော်က နှစ်စဉ် မော်တော်ယာဉ်အစီး ၁,၀၀၀ ထုတ်လုပ်ရန် စီစဉ်နေ